Home Wararka Khilaafka Mareykanka iyo Turkiga oo waji kale yeeshay
Khilaafka Mareykanka iyo Turkiga oo waji kale yeeshay
Xilli uu socdo dagaalka ay militeriga Ruushku gudaha ugu galeen waddanka Ukraine, warbaahinta caalamka ayaa mar kale hadal heyntooda diiradda ku saaraya waxa ku dhici doona hubka difaaca hawada ee S400, oo Turkigu uu ka iibsaday Ruushka.
Ilaa hadda Turkiga laguma soo wareeginin adeegga uu sugayay, waxayna u muuqataa in Ruushka uu galay mashquul kale oo waxaasoo dhan ka weyn.
Mas’uuliyiinta Turkiga ayaa si ay hubkaas u helaan horay ula colloobay xitaa Mareykanka oo ay xulafo ku yihiin isbahaysiga Nato, kaddib markii ay kasoo hor jeesteen in hubka awooddaas leh uu gacanta u galo Ankara.
Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareyknaka, Wendy Sherman, ayaa 5-tii bishan March Wakaaladda Wararka ee Turkiga u sheegtay in arrinta ku saabsan hubka S400 ay tahay “dhibaato muddo dheer” soo kala dhex taallay xukuumadaha Ankara iyo Washington, haddana laga yaabo in “xalkeeda uu waddo cusub yeesho”.
“Waxaa suuragal ah in la gaadhay waqtigii si kale lagu raadin lahaa xalka dhibaatadan. Waxaan eegeynaa waxa la sameyn karo. Wax kasta waxay ku xiran yihiin xaaladda jirta. Waan la kulmi doonnaa saaxiibbadeen,” ayay tidhi Ms. Sherman, oo markaas ku sugneyd Turkiga.
Tallaabada uu Tukiga gantaallada S400 uga iibsaday Ruushka ayaa horseedday in Mareykanka uu cunaqabateynno kusoo rogo saraakiil ka tirsan militeriga Turkiga.
Previous articleUS strikes al-Shabab in lead up to Russia’s war on Ukraine
Next articleDegmooyin ka tirsan Muqdisho oo Dowladda Gacanteeda ka Baxay.
(Sawiro) Deeq uu soo diray Amiirka Dubai oo Muqdisho ku soo...